अत्याधिक कपाल झर्ने समस्यामा अपनाउनुहोस्, यी ४ घरेलु उपाय !! | सुदुरपश्चिम खबर
कपाल झर्ने समस्याबाट धेरै मानिसहरु चिन्तित हुन्छन् । विभिन्न कारणले कपाल झर्ने सम’स्या पैदा हुन्छ । तर, गम्भीर रोगका कारण कपाल झर्ने समस्यामा बाहेक घरेलु विधि अपनाएर यसको समाधान गर्न सकिन्छ । अमलाको जुस अमलामा ट्यानिन र क्याल्शियम जस्ता पदार्थ पाइन्छ । यो दुवै पदार्थ कपाल बढ्न मद्दतगार हुन्छ । र यो कपालको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । कपालको जरामा अमलाको रस लगाउनुस् र ३० मिनेटसम्म लगाउनुस् । यो प्रक्रिया हप्तामा दुईपटक लगाउनुस् । प्याजको रस प्याजको रसले क’पालमा यसको वृ’द्धिका लागि अतिरिक्त सल्फर प्रदान गर्छ । जसले गर्दा कपाल झर्न रोक्ने काम गर्छ ।
माइग्रेनको समस्याबाट मुक्ति पाउने यस्तो छ घरेलु उपाय !!
आधा प्याजको रस निकाल्ने र कपा’लको जरा’मा लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा पखा’ल्ने गर्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा दुई पटक गर्दा क’पाल झर्ने सम’स्यामा कमि आउँछ । मे’थी हेयर मास्क मे’थीको दा’नामा प्रो’टिन र नि’कोटिनिक एसि’डको मात्रा उच्च मात्रामा पाइन्छ । यसले क’पाल झ’र्न र रु’खो हुनबाट बचाउँछ । आधा कप मे’थीको दाना रा’तभर भि’जाउने र पेस्ट बनाएर क’पालको ज’रामा लगाउने गर्नुपर्छ । मे’थीको पे’स्ट लगाएको ३० देखि ६० मिनेटमा प’खाल्नुपर्छ । यो प्रक्रिया हप्तामा एकपटक लगाउनुपर्छ । नरि’वलको तेल नरिवलको तेल क’पालको वृद्धि विकासमा निकै फाइदाजनक हुन्छ । हप्तामा दुई पटक नरि’वलको तेल’ले मा’लिस गर्ने गर्नुपर्छ जसले क’पाल मजबुत बनाउँछ ।
जाडोयाममा औसतमा भन्दा धेरै चिया वा कफी पिउने चलन धेरैको हुन्छ । कोही दू’ध राखेको चियाले ग्या’स्ट्रिक गराउने भन्दै का’लो चिया धेरै पिउने गर्छन् त कोही दू’ध चिया र कफी नै पिउन पनि डरा’उँदैनन् । तर चि’या र कफी पिउनु ग्या’स्ट्रिक र अप’चको सम’स्या भएका बि’रामीको लागि कत्तिको हा’निकारक छ ? वास्तवमा हिउँदमा मानिसहरू विभिन्न प्रकारका फ्रा’इड रो’स्ट खान्छन्, जसले एसि’डिटी र ग्या’स्ट्रिकको सम’स्याहरू निम्त्याउँछ । कहिलेकाँही यस्ता खानामा रहेको अम्ल’ताले पे’टको दु’खाइ, छा’तीमा ज’कडिएको वा गम्भीर टा’उको दु’खाइको सम’स्या पनि निम्त्याउँछ । तर के मानिसहरू चिया पिएर ग्या’स्ट्रिक या एसि’डिटीको शि’कार हुने गर्छन् ? यदि हुन्छ भने यस्तो अव’स्थामा चि’याको विकल्पमा के पिउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न किसिमका खोजीहरू भएका छन् ।ग्या’स्ट्रिकको सम’स्यामा चिया र कफी २०१३ मा गरिएको एक अध्ययनले ग्या’स्ट्रिकको समस्या भएकाहरूले कफी पिउँदा सम’स्या झनै बढ्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ । यस कारणले गर्दा मानिसहरूमा भोक कम लाग्ने, ड’कार धेरै आउने र पे’टमा दु’खाइको म’ससुस हुने गर्छ ।
चि’कित्सक र स्वा’स्थ्य संगठनहरूले समेत ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या भएका मान्छेमा क’फीजन्य पे’य पदा’र्थबाट बच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ती सं’गठनहरूको अ’ध्ययन रिपो’र्टले ग्या’स्ट्रिकका बि’रामीले जति धेरै कफी वा चियाको से’वन ग¥यो उति नै यसको स’मस्या बढ्दै जाने बताएको छ । ग्या’स्ट्रिकको सम’स्यामा कफी जर्नल अफ गे’स्ट्रोएन्टेरोलोजी एण्ड हेपे’टोलोजीमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा स्ट्या’नफोर्ड युनि’भर्सिटीका सह प्राध्यापकले ग्या’स्ट्रिक भएका बि’रामीहरूको जीवनशैली परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्दा कफी एवं कफीजन्य पेय प’दार्थबाट सकेसम्म टाढै बस्न सल्लाह दिएका थिए । यसरी यदि तपाईंले कफी पिउनुहुन्छ, जसमा कफीजन्य प’दार्थ अधिक मात्रा हुन्छ भने यसले पेटमा उत्पन्न हुने ग्यास सम्बन्धी सम’स्यालाई बढाउन पनि सक्छ ।
ग्या’स्ट्रिकको सम’स्यामा चिया पिउँदाका फाइदाहरू अब चिया र ग्यासको सम’स्याको बारेमा कुरा गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले भनिरहेका छन् कि यी सबै क्या’फिनयुक्त पदा’र्थहरूले ग्या’सको सम’स्यालाई बढाउन सक्दछ, चाहे यो कफीमा होस् वा चियामा वा अन्य कुनै खा’द्यान्न वस्तुहरूमा । चियामा क्याफिन मात्र हुँदैन तर अन्य धेरै कम्पोनेन्टहरू पनि हुन्छन् । यदि तपाईंले चिया पिउँदा ग्यासको स’मस्या बढाउने कफिन मात्रै नभएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पदार्थ पनि त्यसमा पाउन सक्नुहुनेछ । तर त्यसको लागि तपाईंले केही ध्यान दिनुपर्ने कुरा समेत छ । उदाहरणको लागि चियामा धेरै दू’ध र चिया’पत्तीहरू नथप्नुहोस् । यसको सट्टामा चियाको पनि फरक भेराइटीहरू छान्नुहोस् ।
जस्तैः –कागती चिया –कालो चिया –हर्वल चिया –सहजनको पातको चिया यति हुँदाहुँदै पनि ग्या’स सम्बन्धी सम’स्याहरूको बेला चिया र कफी पिउने या नपिउने भन्ने स’वालमा अझै धेरै अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ । किनभने धेरै अनुसन्धानहरूले पनि सुझाव दिन्छ कि पूरै आहारबाट कफिन हटाउनु पनि बुद्धिमानी होइन । किनकि कफिनले म’स्तिष्कलाई सक्रिय पार्न पनि मद्दत गर्छ । श’रीरको लागि क’फीका अन्य धेरै फाइदाहरू पनि छन् । तर अझै पनि व्यक्तिहरूले यो कुरा सधैं मनमा राख्नुपर्र्छ कि यदि हामीले सन्तुलित तरिकाले केही खान्दैनौं भने यसले सम’स्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।